Accueil > Gazetin'ny nosy > Ntsay Christian : Miantsy ady ary mamono ny mpandraharaha eny amin’ny Oniversite Antananarivo
Ntsay Christian : Miantsy ady ary mamono ny mpandraharaha eny amin’ny Oniversite Antananarivo
Teny tsy mendrika aloakan’ny vavana tompon’andraikitra no notenenin’ny Praiministra izay nahatezitra ny mpandraharaha teny Ankatso. Nilaza ny Praiministra ny alakamisy raha nanontanian’ny mpanao gazety fa misy vola ny fanjakana ary tsy ekena ny fandaniam-bola fahatany. Rariny loatra izany teny izany. Saingy nanohy izy hoe tsy ny fanaovanana fitokonana no hanomezam-bola ny olona sy hanafenana ny fangalarana sy fanodikodinam-bola. Asa raha tompon’andraikitra io nandray fitenenana io, asa raha raim-pianakaviana io miteny io, asa raha mieritreritra ny teny naloakan’ny vavany io miteny io.
Mpandraharaha tsy mandray karama no resahina eto, mpandraharaha tsy nandray karama tanatin’ny roa volana, mpnadraharaha izay tsy nandefasan’ny fanjakana karama hatramin’ny volana janoary ka ny vola aloan’ny mpianatra eny Ankatso no nandoavana ny karaman’izy ireo. Tompon’ andrakitra ve no mahavita mihantsy ady ohatr’izany nefa karama no tsy alefan’ny fanjakana foibe. Hatramin’ny niandohan’ny fitokonana dia mpandraharaha roa no maty avy ao amin’ny ENS sy avy ao amin’ny chef de service comptabilité tsy nahavidy fanafody nefa taizan’aretina miakatra tosi-dra.
Raha ny vaovao nomena anay teny an toerana dia karama janoary hatramin’ny volana jiona 2021 no toe hoe vao nahazo ” autorisation engagement” avy any Mahazoarivo dia mbola miandry ny avy any Iavoloha. Raha nanao sonia izany ” autorisation engagement ” izany ny Praiministra dia tsy mba misy fo mitempo amin’ny maha olona ve fa efa trosa io nosoniaviny io satria karama efa tokony nalefa efa ela fa dia fihantsiana indray no naloakan’ny vavany. Nandeha nandoro kodiarana moa ny mpandraharaha fa dia re teny ny hoe ” hanody an’ireo tompon’andraikimpanjakana ary indrindra ny Praiministra amin’ny vava nataony izao mahazo anay izao “, nisy koa ny niteny fa ” masina ny olona koa namoizana ain’olona mihitsy ny tsy fandraisan-karama nefa fizahozahoana no nataon’ingahy praiministra ka raha ozona no mahafaty efa maty izy fa izahay izao roahin’ny tompontrano ary tsy afaka mandoa ny saran’ny fianaran’ny zanakay”.
Hatezerana no hita teny Ankatso ny zoma maraina ary hanamafy ny hetsika izy ireo satria koa dia mbola misy mpianatra 700 mahery tsy naharay ny vatsimpianarany amin’ny nanaovana ity “digitalisation” vandana ity ka na mpianatra tsy mianatra aza fa saingy nisoratra anarana dia nisatraka vatsimpianarana fa ny mpianatra tena mpianatra mianatra indray no misy tsy nandray. Eto isika hahita ny tohiny.